MW CMC Oo Afur Usameeyay Maamulada Gobolada Iyo Kabineega Degmooyinka - Cakaara News
MW CMC Oo Afur Usameeyay Maamulada Gobolada Iyo Kabineega Degmooyinka
Jigjiga(Cakaaranews) Axad 28ka May 2017. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maamulada gobolada iyo degmooyinka deegaanka afur sharafeed si heer sare ah loo soo agaasimay ugu sameeyay xaafadiisa.
Afur kadib ayaa waxaa la islasoo qaaday in lasameeyo qormo larabo in afka soomaaliga laga saaro erayga ‘NAAYAA’ oo ah kalmad tilmaamaysa yasid si xun loogu adeegsado dumarka iyadoo qormadan oo laga dooday larabo in lasoo hordhigo hay’adaha sharciga.
Hadaba waxaa dhamaan dumarka sharafta leh ee soomaalida gaar ahaan dumarka DDSI meel kasta oo ay joogaan la ogaysiinayaa inaysan ogolaanin in lagu yidhaahdo erayga ‘NAAYAA’ maadaama uu eraygaasi yahay mid bahdil ah oo meel wayn kaga dhacaya sharaftii dumarkeenu lahaa. Sidaadarteed Ninka xaaskiisa kuyidhaahda erayga naayaa waxaa xaqiiqa ah inuusan jeclayn oo uu yasayo, Hadii ay xaaskiisu kayeeshana ay noqonayso bacaac aan xushmad kamudnayn.
Sidoo kale, waxaa raga xaaslayda ah lagu boorinayaa inay dumarkooda u isticmaalaan erayada naxariista leh sida: Gacaliso, Xabiibti, Hani, Macaan, Indhahaygii, Nuurkaygii IWM. Ragga aan xaaska lahayna waxaa la ogaysiinayaa inay gabdhaha soomaalida ah ee sharafta leh ay u isticmaalaan erayada macaan ee ay kamidka yihiin sida: walaal, Huuno, IWM.
Iskusoo wada duuboo dumarka sharafta leh ee soomaalida ah ayaa waxaa lagu wargalinayaa inaysan marnaba aqbalin in lagu yidhaahdo kalmada ‘NAAYAA’ maadaama hadal qoraal qabyo ah oo ay xukuumadu kasoo saartay in kalmada Naayaa laga saaro afsoomaaliga laga wada hadlayo islamarkaana uu horyaalo hay’adaha sharciga.